कसरी एक व्यवसाय उडान डिजाइनर मान्छे वास्तविक पढ्नुहोस् Print Peppermint
कसरी एक व्यवसाय उडान डिजाइन गर्ने मान्छे वास्तविक पढ्नुहोस्
नोभेम्बर 28, 2019 | व्यापार, प्रिन्ट डिजाइन, सुरूवात
कसरी व्यवसाय उडानहरू डिजाइन गर्ने मान्छे वास्तविक पढ्नुहोस्
तपाईंको व्यवसाय उडानहरू केवल पैसाको बर्बादी हुन् यदि व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्छन्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाइँ कसरी व्यवसाय फ्लायरहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जान्नको लागि मानिसहरू वास्तवमा पढ्न चाहान्छन्।
लिखित शब्द मरेको छ भनेर दावी गर्नेहरूको लागि, मुद्रण उद्योगले यो पुरानो मानसिकतामा पुनर्विचार गर्ने समय आएको घोषणा गर्दछ।
बाहिर जान्छ, % Of 88% बरु स्क्रिनबाट भन्दा कागजबाट पढ्न चाहान्थे, दाबी गर्छन् कि उनीहरूले त्यस प्रकारको जानकारी राम्रो तरीकाले राख्छन्। यो केवल तिनीहरूका उपन्यासहरूमा लागू हुँदैन। तिनीहरू पनि व्यापार आइटम र प्रचार सामग्री प्राप्त गर्न रुचाउँछन् साथसाथै।
यदि तपाईं व्यवसाय फ्लायर डिजाइन गर्ने उद्योगमा हुनुहुन्छ भने, यो राम्रो समाचार हो। अझै, यसको मतलब यो होइन कि केहि पनि गयो र प्रक्रियाको क्रममा कुनै विचार आवश्यक छैन। कुनै पनि विज्ञापन वस्तुको रूपमा, यो आकर्षक, आकर्षक र पर्याप्त उपयोगी नभएसम्म, फ्लायरले छिटो फोहोरबासकेटमा नयाँ घर फेला पार्न सक्दछ।
त्यसो भए, के एक महान उडानमा जान्छ? कुन कम्पोनेन्टहरूले कारको पछाडि वा ट्रेड ब्याग स्वाग ब्यागको मुनि टुक्रिनु भन्दा यस डेस्कमा बस्नका लागि हरियो बत्ती दिन्छ? आज, हामी छलफल गरिरहेछौं कि तपाईं कसरी शो को स्टार बनाउन सक्नुहुन्छ।
थप सिक्न तयार हुनुहुन्छ? सुरु गरौं!
१. पहिले आधारभूतहरू लिनुहोस्
तपाईंले विस्तृत फ्लायर डिजाइनमा जानु सुरु गर्नु अघि, यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि बाँकी भन्दा पनि कसरी राम्रो गुणस्तरको फ्लायर सेट गर्दछ। सबै भन्दा माथि, यो ध्यान आकर्षणको हुनु पर्छ।
कसैलाई प्रोत्साहित गर्न सब भन्दा द्रुत तरीका तपाईको दोस्रो दृश्य नदेखी हिंडिरहनको लागि? पाठको साथ शीर्षदेखि तल भर्नुहोस्।
यसको सट्टा, यसलाई सकेसम्म सरल र संक्षिप्त रूपमा राख्नुहोस्। केवल पाठको साथ तपाईलाई के आवश्यक छ भन्नुहोस् र ग्राफिक्सले बाँकीको हेरचाह गर्न दिनुहोस्। पाठकको आँखा प्राकृतिक रूपमा आराम गर्न अनुमति दिन धेरै सेतो खाली ठाउँ छोड्नुहोस्। यो एक आधारभूत कला र डिजाइन अवधारणा हो जुन लगभग सबै प्रचार सामग्रीहरूमा लागू हुन्छ व्यापार कार्डहरू डाटा स्लिक्समा।
तपाईं यसमा हुनुहुन्छ जब, यो निश्चित गर्नुहोस् कि फन्ट साइज बाहिरको लागि ठूलो छ र कसैलाई चश्मा पढ्ने जोडी बाहिर निकाल्दैन। एक पेशेवर रूप को लागी, मुख्य रूप से sans-serif फन्टहरु मा छडी रहनुहोस् जुन धेरै स्क्रोल जस्तो वा प्रकृतिमा सजिलो छैन सन्देश सुनिश्चित गर्न को लागी डिजाइन मा गडिएको छैन।
२. ग्रिडहरूको वरपर खेल्नुहोस्
एक व्यवसाय फ्लायर डिजाइनले सामग्रीको एक टन समावेश गर्न तपाईंलाई धेरै कोठा छोड्दैन। यो जहाँ एक सिर्जनात्मक को रूप मा तपाइँको कौशल साँच्चै चमक गर्न सक्छ।
सानो ठाउँमा ठूलो सन्देश प्राप्त गर्ने लोकप्रिय तरिका सामग्रीलाई ग्रिडमा मिलाउनु हो। जब तपाईं एक अखबारमा यस प्रकारको लेआउट हेर्न प्रयोग हुन सक्नुहुन्छ, ती स्तम्भहरू सामान्यतया समान आकारका हुन्छन् र तपाईंको फ्लायरलाई अनावश्यक कठोरताको भावना दिन सक्छन्।
यसको विपरित रूपमा, जब तपाईं ग्रिडहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईं तिनीहरूलाई अनुकूलन-डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तिनीहरूको लम्बाइ र चौड़ाई फरक हुन्छ। जानकारीको छोटो स्निपेटहरू राख्नुहोस्, जस्तै बुलेट पोइन्टहरू, सानो साइड स्तम्भमा सीमित छन्। त्यसो भए, तपाई विन्दुमा थोरै विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ विस्तृत, मध्य स्तम्भहरू।
अधिकांश व्यवसाय उडानहरू कि त A5 वा A6 पृष्ठ आकार। तपाईको सामग्रीको वरिपरि प्ले गर्नुहोस् कुनमा उत्तम देखिन्छ। तपाईको हेडरको लागि शीर्ष तेस्रो रिजर्भ गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको डाटा पोइन्टहरू र सम्पर्क जानकारी सहित फुटरको बीच दुई दुई तिहाई विभाजन।
अन्तिम रूपमा, जबसम्म तपाइँको अनुपातहरू सन्तुलित छन्, तपाइँले यो ट्रिकको प्रयोग अझ थोरै डाटामा प्याक गर्न सक्नुहुन्छ जबकि अझै तपाइँको लाइनहरू सफा राख्दै।
Old. फोल्डहरू विचार गर्नुहोस्
विशेष गरी यदि तपाइँसँग समावेश गर्न डाटाको एक महत्वपूर्ण मात्रा छ भने, एक फ्लाइड फ्लायर डिजाइन प्राय तपाइँको उत्तम शर्त हो। तपाइँको विशेष आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दै, एक साधारण आधा पट ब्रोशर तपाइँलाई चाहिने सबै हुन सक्छ। वा, तपाईलाई बढि विस्तृत ट्रायल-फोल्डको आवश्यक हुन सबै कुरा भित्र पस्न सुनिश्चित गर्दछ।
यद्यपि यो अलि बढी काम हुन सक्छ, फोल्ड ब्रोशरहरू समतल प्रतिस्पर्धीहरूको समुद्री बीचमा बाहिर खडा हुनेछ। यो पाठ्यपुस्तकको मार्गमा तपाइँको प्रापकहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न मद्दत गर्ने एक सरल, तर प्रभावशाली तरीका पनि हो, कसरी चाहिने मार्गबाट ​​पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म पुग्ने तरीका तिनीहरूलाई।
Your. तपाईंको दृश्यहरू चम्काउन दिनुहोस्
हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं कि मानिसहरू कागजातमा उनीहरूको सामग्री हेर्न चाहन्छन्। अब, हामी यसलाई एक कदम अगाडी जान्छौं। के तिनीहरू वास्तवमै हेर्न चाहन्छन् तपाईंको छविहरू।
अनुसन्धानले देखाउँछ % Of 90% दृश्य सिक्नेहरू हुन्। एउटै अध्ययनले देखाउँदछ कि हामी हामीले हेर्ने 80०% लाई कायम राख्छौं जुन हामी पढ्छौं त्यसको २०% र हामीले सुन्नेको केवल १०% मात्र तुलना गर्छौं।
टेकवे? यदि तपाईंसँग डाटा पोइन्ट छ कि दृश्यमा राम्रोसँग व्याख्या गर्न सकिन्छ, यसको सट्टामा एक प्रयोग गर्नुहोस्। तपाई पोइन्ट होम ड्राइभ गर्न छविको माथिल्लो पाठ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो साधारण ग्रेडियन्ट ट्रिकहरू र पारदर्शिता समायोजनहरू मार्फत पूरा गर्न सकिन्छ जसले तपाईंलाई तपाईंको अन्तरिक्षको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्षम गर्दछ।
अवश्य पनि, सबै छविहरू स्वाददार र उपयुक्त हुनुपर्छ। केवल स्तब्ध गर्न ग्राफिक्स प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन। यसको सट्टामा, तपाईले के बिक्री गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको सही प्रदर्शन गर्नुहोस्।
तपाईं पपको पछाडि र color्गीन ब्लकमा भर पर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पप गर्न र तपाईंको फ्लायरमा रमाईलो मोडमा थप्नको लागि!
Imal. मिनिमलिज्म अँगाल्नुहोस्
त्यहाँ एक कारण छ आधुनिक न्यूनतम आन्दोलन यति बलियो हुन जारी छ।
जब हामी हाम्रो जीवन डिक्लटर गर्दछौं र आफ्नो वरिपरिको वातावरणलाई सरल बनाउँछौं, हामी तुरून्त शान्तिको भाव निम्त्याउँछौं। हामीले पढेको र मानसिक रूपमा पचाउनेको लागि पनि यो ठीक छ।
यद्यपि तपाईलाई अनलाइन फ्लायर मेकरको प्रयोग गर्न लोभ्याउन सक्छ जुन कल्पित र सकेसम्म रंगीन डिजाइन बनाउनको लागि हो, यो प्राय जसो चासोको पक्षमा तपाईको भलोको लागि हुन्छ।
यो चरण विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं एक पेशेवर उत्पादन वा सेवाको विज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ, वा कर्पोरेट घटनामा तपाईंको फ्लायर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। सफा-हेर्ने ह्यान्डआउटलाई गम्भीरताका साथ लिने सम्भावना धेरै छ जुन क्लिष्टिंग टोन, बेमेल छविहरू, र अव्यवस्थित पाठको साथ पूर्ण छ।
अझै पनि, यदि तपाईं यो मार्ग जान्नु भए पनि, तपाईंको उडानहरू बोरिंग गर्नु पर्दैन। एक एक्सेन्ट र color्गमा टाँस्नुहोस्, जस्तै टिल निलो वा रायोको पहेलो, र यसलाई महत्वपूर्ण भागहरू हाइलाइट गर्न र व्यक्तित्वको टच थप्न प्रयोग गर्नुहोस्।
6। तपाईंको लक्षित श्रोतालाई बुझ्नुहोस्
तपाईंको फ्लायरलाई सरल र सफा राख्ने माथि उल्लिखित सुझावहरूले औपचारिक ट्रेड शोमा एक स्टार बनाउनेछ।
अझै, के हुन्छ यदि तपाईं नाइटक्लब वा बाहिरी बारबेक्युको विज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईं यति कठोर हुनुपर्दैन।
कुञ्जी भित्र छ तपाइँको लक्षित श्रोतालाई बुझ्दै। उनीहरू के को बारेमा जान्न चाहन्छन्? के त्यहाँ कुनै निश्चित सर्तहरू वा उद्योग jargon तिनीहरूले प्रतिक्रिया गर्न अधिक संभावना छ?
निश्चित छैन कि कसरी तपाइँको आदर्श खरीददार फेला पार्न? कसलाई हाल तपाईको ब्यापार गरिरहेको छ भनेर हेरेर सुरु गर्नुहोस्। त्यसो भए, यी प्रयोगकर्ताहरूका उमेर, स्थान, पेशा र अधिक समावेश सहित केहि साझा सुविधाहरूमा हेर्नुहोस्।
यी थप दुई पूर्ण चरणहरूमा विस्तृत रूपमा छन् दर्शक विश्लेषण, त्यसैले यो आलोचनात्मक अनुसन्धान गर्न व्यस्त उडानहरू सिर्जना गर्नका लागि समय लिनुहोस् जसले ग्राहकहरूलाई सम्भावित रूपान्तरण गर्दछ।
यदि तपाइँ एक संग साझेदार ग्राफिक डिजाइन विशेषज्ञ, यो विशेषज्ञ अक्सर तपाईंलाई राम्रोसँग तपाईंको आदर्श क्रेता व्यक्तित्वमा बोल्छ जुन ढाँचा फिगर गर्नमा मद्दतको लागि राम्रोसँग निपुण हुन्छ।
The. फाइदाहरू हाइलाइट गर्नुहोस्
हो, पाठकहरू अधिक फाइन-प्रिन्टमा रुचि लिन सक्छन्, तपाइँको उत्पादन वास्तवमा कसरी काम गर्दछ भन्ने प्राविधिक विवरणहरू। यद्यपि, उनीहरूको दिमागमा नम्बर एक प्रश्न निस्सन्देह, "यो मेरो लागि के हो?"
यो त्यहि हो जहाँ यसले तपाईंको बेनिफिटहरू सकेसम्म धेरै अलग देखाउनको लागि भुक्तान गर्दछ। पत्रकारिता मा बोल्नुहोस्, नेतृत्व दफन छैन।
प्राप्तकर्ताहरूले पाठको टमहरू वा ध्यान भंग हुने छविहरूको माध्यमबाट आफ्नो मार्ग बनाउनु हुँदैन तपाईले विज्ञापन गरिरहनु भएको छ र तिनीहरूले यसको साथ कसरी आफ्नो जीवन सुधार गर्न सक्दछन्। तिनीहरूले सुरूबाट ठ्याक्कै विवरणहरू हेर्न सक्षम हुनुपर्दछ जुन तपाईंको ब्रान्डलाई विशेष बनाउँदछ र नजिकबाट नियाल्नुहोस्।
के तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धी भन्दा अलग सेट? कसरी तपाईं तिनीहरूलाई पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई मद्दत गर्न अझ छिटो प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न वा तिनीहरूको प्रदर्शन सुधार गर्न?
ठोस तथ्या .्क र तथ्या Use्क प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ सम्भव भए आफ्नो दाबीहरू प्रमाणित गर्न।
An. एउटा प्रस्ताव समावेश गर्नुहोस्
के तपाईंलाई त्यो वरपर थाहा थियो? 90% shoppers को तिनीहरू कति खर्च गर्न लाग्छन् र उनीहरूले बढावा प्राप्त गरेको पदोन्नतिको आधारमा उनीहरू के खरीद गर्न जान्छन् निर्णय गर्नुहोस्?
संभावनाहरू छन्, यदि तपाईं व्यवसायको लागि उडानहरू सिर्जना गर्ने प्रयासमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रक्रियामा आफ्नो तल लाइनलाई मद्दत गर्नको लागि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ। बिक्री र मार्केटिंग एक अर्कामा निर्भर छन् र कुनै पनि तरीकाले तपाईं आफ्नो दर्शकहरूलाई तपाईंको ब्रान्डलाई नजिकबाट हेर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुनेछ आय उत्पन्न गर्न मद्दत गर्न।
यदि सम्भव छ भने, एट्याच गर्न विचार गर्नुहोस् छुट वा पदोन्नती तपाईंको फ्लायरमा कि प्राप्तकर्ताहरूले तपाईंको अनलाइन वा ईंट-र-मोर्टार स्टोरमा रिडिम गर्न सक्दछन्। उदाहरण को लागी, तपाई पहिलो चोटि ग्राहकहरु को लागी २०% छुट, एक मित्र को संदर्भ को लागी छुट, वा भर्चुअल चेकआउट मा कुपन कोड प्रयोग गर्न को लागी प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
The। तिनीहरूलाई झुण्ड्याउन छोड्नुहोस्
प्रत्येक महान फ्लायरमा एक विवेकी कल टु एक्सन वा सीटीए समावेश हुन्छ। संक्षिप्तमा, यो पृष्ठको यो अंश जहाँ तपाईं पाठकलाई अर्को चरण लिनको लागि निर्देशन गर्नुहुन्छ। यो लाईन रिडिंग जत्तिकै सरल हुन सक्छ "थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्", तपाईको कम्पनीको मेलि address ठेगाना, फोन नम्बर, र ईमेल ठेगाना पछ्याईन्छ।
वा, तपाईं तिनीहरूलाई अनलाइन हप गर्न र तपाईंको बृहत उत्पादन सूची जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं तुरुन्तै अर्डर गर्न अनुमति दिनको लागि लिंक पनि समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको उत्पादन वा सेवामा हेर्नुहोस् र तपाईं कसरी आफ्ना पाठकहरूलाई प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ।
जे होस्, यो स h्केत गर्ने ठाउँ होइन। सम्भव भएसम्म CTA को रूपमा प्रमुख र सजीलो फलो गर्नका लागि स्पष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यसो भएमा, सन्देशलाई सकेसम्म स्पष्ट बनाउँनुहोस् प्रतिक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सम्पर्क जानकारी सहि उडानहरू प्रिन्ट गर्नु अघि सही र अप-टु-डेट छ, साथै!
१०. ठूलो कागजमा लगानी गर्नुहोस्
तपाईं महान डाटाको साथ काण्डमा भरिएको डाईनामिक डिजाइन सिर्जना गर्नुहुने छैन, केवल छापिएको प्रिन्टर कागजमा छाप्नको लागि जुन बलियो हावाको साथ आधा फाड्न सक्छ, के तपाईं गर्नुहुन्छ?
ब्यापार गर्ने व्यवसाय फ्लायर सिर्जना गर्ने अन्तिम चरणमध्ये एक भनेको उच्च स्तरको कागज र प्रिन्टर छनौट गर्नु हो जुन तपाईंको डिजाईन सपना वास्तविकतामा ल्याउनको लागि हो। यदि उपयुक्त छ भने, चमकदार फिनिशको लागि वसन्त yoursतु तपाइँको एक पेशेवर शीन दिन बाहिर निश्चित छ।
समाप्त भएको उत्पादनमा साइन इन गर्नु अघि, एक परीक्षण प्रिन्ट चलाउनुहोस् सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै कुराको जस्तो देखिन्छ। यो एक स्थान हो जहाँ तपाईंले आफ्नो लगानीमा फिर्ताको दोस्रो अनुमान कहिले पनि गर्नुपर्दैन।
यस क्षेत्रमा कम्ती सस्तोमा जानुहोस्, र तपाईंको फ्लाईयर क्रिle्गल हुनेछ र सजिलै चुस्त हुनेछ। यसले महान प्याकेजि material सामग्रीको लागि बनाउन सक्छ, तर यो त्यस्तो होइन जहाँ तपाईं आफ्नो घण्टाको मेहनतको घण्टा समाप्त भएको चाहनुहुन्छ। भारी स्टक पेपर कडा र शिकनमा कम झुकाव हुनेछ, यसले यसको आकारलाई चारैतिर घुमाउँदा यसलाई राख्न मद्दत गर्दछ।
वास्तवमै एक विशेष स्पर्श थप्नको लागि, तपाइँ तपाइँको फ्लायर वा यसको एक विशेष अंश एम्बोस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तीन आयामिक तत्त्व थप्दछ जुन छिटो आकर्षक र रमाईलो छ!
आज बाध्यकारी व्यवसाय उडानहरू सिर्जना गर्नुहोस्
अब जब तपाईलाई व्यवसायिक उडानहरू कसरी बनाउने भन्ने बारे अझ थोरै ज्ञान छ जुन उनीहरू राम्ररी डिजाइन गरिएको हो त्यसरी नै रोचक छन्, के तपाईं आफ्नो केही सिर्जना गर्न तयार हुनुहुन्छ?
यदि तपाईं व्यवसायको मालिक हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाँहा छ कि त्यसो गर्दा तपाईंको समयको एक ठूलो हिस्सा लिन सक्दछ। हामी बुझ्दछौं कि तपाईं दिन-प्रतिदिन कार्यहरूको ख्याल राख्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ र वास्तवमै तपाईंको ग्राफिक डिजाइन र डिजिटल मार्केटिंगको प्रत्येक पक्षमा विस्तृत, ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण लिन समय छैन।
भाग्यवस, हामी गर्छौं र हामी सहयोग गर्न चाहन्छौं।
हामी व्यापक प्रस्ताव गर्दछौं ग्राफिक डिजाइन सेवाहरू निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको ब्रान्डलाई भित्रबाट नै रूपान्तरण गर्नुहोस्। हामी तपाईंसँग अन्तिम चरणमा कार्य गर्नेछौं सुनिश्चित गर्नका लागि कि अन्तिम उत्पादन एक हो तपाईंको नाममा गर्व गर्नमा गर्व गर्नुहुन्छ।
दिमागमा कुनै अवस्थित डिजाइन छैन? समस्या छैन। हामीसँग छनौट गर्न डिजाइन प्याकेजहरू छन् र एक टोली जुन तपाईं बढ्नको लागि तयार छ। जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ, आज हामीलाई नि: शुल्क सम्पर्क गर्नुहोस् कस्टम उद्धरण र हामी के गर्छौं भन्ने बारे अधिक जान्नुहोस्!
← किन ग्राफिक डिजाइन प्रत्येक व्यवसायको मार्केटिंग रणनीतिको एक हिस्सा हुनुपर्छ
तपाईंको व्यवसायका लागि फ्लायर मार्केटिंगको शीर्ष १० लाभहरू →